Ngabe amabhayisikili amaxoxo abiza imali? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ixoxo ibhayisikili elingu-tadpole balance - Complete Manual
Ixoxo ibhayisikili elingu-tadpole balance - Complete Manual
Ngabe amabhayisikili amaxoxo abiza imali?
Amabhayisikili Eseleube nenani elihle lokuthengiswa kabusha. Zingasetshenziswa yizingane eziningi kunokugcina ngokulahla udoti ngemuva kwezinyanga eziyisithupha. Ngakho-ke yize ungadinga ukusebenzisa imali ethe xaxa ekuqaleni ngeke ukwazi ukusebenzisa i-ibhayisikilingezelamani kodwa ngeke ube nenkinga ngokuthengisaitkuqhubeke ngemuva.8. 2020.
Amabhayisikili amabhalansi ayindlela enhle yokwenza izingane ezisacathula zihambe, futhi ziyisinyathelo sokuqala esifanelekile esiqonde ebhayisikili langempela. Izindaba ezimnandi ukuthi bangahamba ibanga elide futhi ngokushesha nje lapho imilenze yabo emincane ingabashelelezisa ukuze bangakwazi ukude kakhulu kuwe, noma kukhona ukukhetha okukhulu kokuthile okungamabhayisikili amabili nesihlalo, futhi kunezinto ezithile ezibalulekile okufanele uzicabange lapho uthenga ibhayisikili lakho elilinganisiwe esizongena kulo ngemuva kwesikhathi samahora angama-30 sokuhlolwa. Siphenye wonke amabhayisikili abhalansile emakethe, salalela imibono yabasebenzisi bakwaMumsnet, sathumela omunye wabahloli bethu ebaleka nengane yabo encane.
Sithuthukise amabhayisikili ayi-8 amahle kakhulu atholakala manje emakethe. ukukhanya okuhlukile, okubaluleke kakhulu ezinganeni ezisacathula, kepha nakubazali abazoyiphatha ngokungenakugwenywa le nto, ibambe kakhulu amathayi okufaka ubufakazi bokubhoboza kanye nebhuleki lesandla, okungasetshenziswa ngisho nayizandla ezincane, kunebanga leminyaka elinganiselwe, ngoba abanye abazali bayabeka kodwa bagcina inani labo futhi ungabathengisa njalo bese uthenga futhi uthenge usayizi olandelayo isandla sesibili Konke sekuyibhayisikili elihle kakhulu, okulandelayo yiFrog Bikestadpole okungaphezulu kwesiqhumane sebhayisikili sezintaba Esakhelwe amandla nejubane uma uhlala ezweni noma uma uthanda kakhulu ngempelasonto futhi ujabulele imizila yomgwaqo, nokuyinto ezothinta nakanjani ibhayisikili elisele olithengayo. Lokhu kungaba inketho enhle kuwe.
Kubiza kakhulu futhi kusinda kancane kunabanye. Uma ufuna ibhayisikili elinama-aesthetics amaningi we-BMX ungabheki ngaphezu kwe-white Napier 2020 efanelekayo izingane ezineminyaka engu-2-4, kusho ukuthi ihlanganisa iminyaka yobuntwana ngokunethezeka impela futhi yaqanjwa ngamabhayisikili kaChris Hoy iBMX aklanyelwe, ngokusobala iNapier icishe ibe namandla kunamanye amabhayisikili asemakethe, kodwa iqinile impela futhi ayinayo intengo esizokuklabisa ngayo. Isisindo sayo singu-2.9kg nje, iStrider 12 ngenye yamabhayisikili alula kakhulu esiwahlolile, futhi kuyindlela enhle yokuhamba ngebhayisikili eseceleni komgwaqo ngokukhishwa okusheshayo, ifreyimu encane ye-aluminium ezokwenza kube lula ukuthi ingane yakho ingene futhi icime , kanye ne-footrest esebenzayo ekhuthaza ukuhamba ngesikebhe okungathi sína.
IStrider yibhayisikili elenziwe kahle, elilinganiselwe kahle elizothandwa yizingane nabazali futhi lingasetshenziswa kusukela ezinyangeni eziyi-18 kuye eminyakeni emihlanu ubudala. Lokhu kuhlanganiswa okukhulu futhi kufanele nakanjani kubhekwe lapho uthenga ibhayisikili elilinganiselayo. ICarrera Coast ngesinye isibonelo esihle sebhayisikili yebhalansi yesabelomali enikeza izimbangi zayo ezibiza kakhulu ukugijimela kwemali yazo ngayo.
Uzothola ikhava encane ngayo, ukuthi kulula kanjani ukuphula ibhayisikili Ekugcineni into ozoyifuna kubhayisikili elinganiselayo, futhi kufanele wazi ukuthi ibhuleki lesandla leCarreras Tech-Dro lidinga ingcindezi enhle kepha kukho konke iCarrera I-Coast ibhayisikili elihle elinobungane abazali abaningi abazolithanda ngokulandela ibhayisikili elibukeka kahle kakhulu, linefreyimu yokhuni eyenziwe kahle ngokhuni lwe-birch olusimeme. Le modeli inamasondo ayizigaxa ahamba kalula phezu kwezinhlobo ezahlukene zezwe, kepha yenziwa ngokhuni okwenza kube nzima uma ingane yakho incanyana noma uma unosana oluncane, lokhu kungenzeka kungabi ibhayisikili elilula kakhulu kubo, ngakho-ke sincoma leli bhayisikili lisukela eminyakeni emithathu ubudala ezinganeni ezidinga ukukhuthazwa ngokuzethemba ekufundeni ukugibela ingane yakho, uma zidinga ukwesekwa okwengeziwe futhi ibhuleki lesandla lisho nokuthi zingakwazi ukubhuleka kalula kalula uma uhlala endaweni indawo yasemadolobheni, Nakanjani kufanele ucatshangelwe. Leli bhayisikili lisohlangothini olusindayo, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ilungele izingane ezineminyaka emithathu nangaphezulu, kepha ibhayisikili elincane elihle futhi inendawo enkulu yokukhula.
Ekugcineni sine-microtwo-in - ibhayisikili elilinganiselayo elisebenza njengebhayisikili elilinganiselayo noma elingasetshenziswa njengebhayisikili elinamasondo okuqeqesha. Leli bhayisikili nakanjani lizoyisa ingane yakho isuka ku-A iye ku-B, kodwa inamasondo amancane ngakho-ke kungcono impilo ezindleleni zomgwaqo noma ezindaweni ezishelelayo uma ucabanga ukuthi ingane yakho isendleleni Ukuze ube ngumgibeli ojwayelekile kunokuhamba ngebhayisikili elinganiselayo, iMicro Two-in-One mhlawumbe iyindlela engcono kakhulu kuwe, kepha ungakhohlwa ukubhalisa ukuze ungaphuthelwa yizo zonke izeluleko nezeluleko zokubuyekezwa komkhiqizo we-Mumsnet
Liyini ibhayisikili elilinganisela ixoxo?
I-IxoxoUnoswaziibhalansi ibhalansiifaka amathayi omoya, ibhuleki lesandla eliphendulayo, nezinto ezisezingeni eliphakeme esitebeleni, okulula ukusisebenzisaibhalansiifreyimu. Ngemibala ehlukene engu-8 nemiklamo kanye nesihlalo esingaguquguqukayo namabhande, iIxoxoUTadpole uvumelana nezimo ukuze uvumelane nohlu oluningi lwezinsana ezineminyaka emibili kuya kwengu-4.
Yibuphi ubudala obulungele ibhayisikili elilinganisiwe?
Amabhayisikili amabhalansiimvamisa yezingane ezisukela ezinyangeni eziyi-18 kuye eminyakeni engu-7 ubudala. Uma ingane yakho ikwazi ukuhamba, maningi amathuba okuthi ingasebenzisa i-ibhalansi ibhalansi. Njengobaibhalansi emabhayisikiliabanayo i-drivetrain (ama-pedals, ama-cranks njll.) aphansi kakhulu phansi futhi alula kakhulu kunezingane zendabukoamabhayisikili.
Sanibonani nonke, nginguBrent ngeStrider Bikes futhi namhlanje sizoxoxa ngomunye wemibuzo evame kakhulu esiyithola lapha, iStrider. Yikuphi ibhayisikili elilungele ingane yami? Ngakho-ke lo ngumbuzo okhohlisayo ngoba zonke izingane zikhula ngamazinga ahlukile kanti ezinye zikhula njengokhula, ezinye azikhuli kangako. Mhlawumbe okuthe xaxa ohlangothini oluncane.
Ngakho-ke sincoma ukuthi ulinganise ubude begxathu lakho. Indlela enhle yokukala ubude begxathu lengane ukuthatha incwadi bese uyibamba phakathi kwemilenze yayo. Ungayibamba leyo Can you hold it with your legs Alright.
Imilenze yakhe ayibambe bese ethatha itheyiphu yokukala bese uyikala ukusuka phansi kuye phezulu encwadini. Ngakho-ke i-in-bill kaDaxton icishe ibe ngamayintshi ayi-14. Lokhu akuyona isayensi ngqo, kepha kuzokunikeza umbono omuhle impela wokuthi ubude begxathu lengane yakho bukuphi futhi kuzokusiza ukuzivumelanisa namabhayisikili ahlukile.
Ngakho-ke umkhiqizo wokuqala esizokhuluma ngawo yi-2-in-1 Rocking Bike, i-2-in-1 Rocking Bike eyenzelwe izingane ezisanda kuzalwa ezineminyaka emihlanu ubudala futhi njengoba ubona, uRyder ujabule kakhulu. Ngakho-ke uRyder unezinyanga eziyisishiyagalolunye ubudala futhi sivele samfaka ebhayisikili lapha. Uyabona ukuthi ezinyangeni eziyisishiyagalolunye mude kancane ngeminyaka yakhe, kodwa ukuthi zombili izinyawo zakhe ziphephile emsamo.
Lokhu kungenxa yokuthi ukuphakama kwesihlalo kwehla ngamasentimitha amahlanu lapho ufaka ibhayisikili esisekelweni. Ngakho-ke ungakwazi ukufaka i-kiddo enhle kakhulu ebhayisikili. Inzuzo enkulu yalokhu ukuthi ugibela ibhayisikili lakho kusenesikhathi njengoba ubona ukuthi ubamba izibambo kahle.
Unethezekile ngebhayisikili futhi kungenzeka angakanyakazisi okwamanje, kepha ufunda ukuzinza ngempela ngoba uluhlobo lokuzamazama emuva naphambili lapha ukuthi ulwenza kahle kanjani. Ngakho-ke lo nguRyder, unezinyanga eziyisishiyagalolunye ubudala ebhayisikili elizamayo. Manje sengizoletha ingane encane ethe xaxa ukukukhombisa ukuthi ibukeka kanjani, ukuthi ayingeni lapho isikhulu kakhulu kuyo, kulungile.
Manje sengibuyile nomngane wami uDax kanti uDax ungahlala esondweni elijikayo? Ngakho-ke uyabona, yize uDax elingana kuso futhi ethokozisa kakhulu ngaso, kusobala ukuthi sikhulu kakhulu kuleli bhayisikili. Ngakho-ke manje ake sikhulume ngebhayisikili leStrider 12 inch futhi ngineDaxtonhere bese nginoFinn nami. Manje uDax noFinn bahlukaniswe ngokoqobo ngesonto.
Bazalwe behlukaniswe isonto, bobabili bacishe babe babili nohhafu, kepha uyabona ukuthi iDaxton mude kancane kunoFinn. Umthetho? Ngithi lapho izingane zikhula ngamazinga ahlukile futhi awukwazi ukulungisa usayizi webhayisikili ngokweminyaka yazo. Ake sibone ukuthi zingena kanjani kubhayisikili eliyi-intshi eli-12.
Ngakho-ke ngine-12 intshi Classic lapha yeDaxton futhi njengoba ubona ukuthi ingena kahle kuyo, kusenendlela ethile. Uhlala lapha, kulungile? Futhi-ke sinomdlalo wamasentimitha angu-12 lapha kaFinn. Manje i-12 inch Classic ibhayisikili lethu elisezingeni lokungena.
Kunezinto ezimbalwa iClassic engenazo njengamamodeli weSport nePro ayeseRocking Bike. Okukhulu kunakho konke yisihlalo esinwetshiwe, ngakho-ke ibhayisikili eliyi-Classic liza neposi esihlalweni elizohlala kuze kube seminyakeni emithathu ubudala, kanti amamodeli weSport nePro eza nesikhala esandisiwe esiyohlala cishe eminyakeni emihlanu ubudala kufanele igcine iminyaka ubudala. Imodeli engu-intshi engu-12 inebanga lamasentimitha angama-30 kuye kwangama-51, okungamayintshi angama-11 kuye kwayi-16 ama-Classic nama-intshi ayi-12 kuye kwayi-20 kwezeMidlalo nePro ngalesi sihlalo esandisiwe.
Kukhona nezibambo ezincane uma kuqhathaniswa nalena. Kukhona iphedi yokubamba lapha engekho lapha nezinye izinto ezimbalwa. Kodwa-ke, uma ufuna imodeli yezinga lokungena ukuze uthole ingane yakho ngebhayisikili, ama-Classics ayindlela enhle ongayihamba.
Uma ufuna ukuzigcina isikhashana futhi unezici eziningi, iSport nePro nakanjani kuyisinqumo esifanele. Manje sinoDaxton ku-14x lapha bese kuba noFinn ku-12 inch. Manje usuyabona ukuthi uDaxton angathinta phansi ku-14x, kepha imilenze yakhe iqonde kancane futhi sihlala phansi kwe-14x.
Uyanela, uyakwazi ukugibela leli bhayisikili, kepha ngeke kuqinise ukuzethemba ukuthi le intshi engu-12 izomsebenzela. Ngeke kube mnandi kangako, kukhudlwana, kusinda kancane, nakanjani futhi ngeke nakanjani abe ibhayisikili elifanele yena. I-14x inokuphakama kwesinyathelo kwamasentimitha angama-42-58 noma ama-intshi ayi-16 kuye kwangama-23 futhi ayikwazi ukuguqulwa ibe yibhayisikili lokuhambisa.
Ngizoba noFinn, ungagibela lapha, ungaya kumama wakho bese uCorbin ngizokuvumela ungene lapha ngakho uCorbin uneminyaka emihlanu kanti uCorbin usayizi ophelele we-14x. Uyabona ukuthi i-14x inekhithi yokuhambisa. UCorbin angathinta phansi.
Isihlalo sinesikhala esincane sokwehla senyuka, izibambo zisenezinketho eziningi zokulungisa futhi uCorbin angaligibela kahle leli bhayisikili futhi njengoba ubona, uDaxton ufuna ngempela ukuqalisa. Ngiyethemba le ndatshana ikusizile ukuthi unqume ukuthi yiliphi ibhayisikili elingcono kakhulu enganeni yakho. Uma unemibuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nesevisi yethu yamakhasimende.
Sinezinsizakusebenza ezinhle kuwebhusayithi yethu. Into ebaluleke kakhulu ongayisusa ukuthi ulinganise ubude begxathu lengane yakho bese uyalithatha futhi, uma ungabaza, ulinciphisele ingane yakho kancane. Ikakhulukazi uma bekungekho kuStrider phambilini, singathanda ukuthi sakhe ukuzethemba nokulinganisela ngaphambi kokuthi sikufake ebhayisikili elikhulu.
UDaxton uthi le ndatshana isiphelile ngakho ngethemba ukuthi uyithokozele sizokuthola ngokuzayo!
Ungakwazi ukwengeza ama-pedals kubhalansi yebhayisikili?
Mane uthathe ifayela le-amaphedalioff bese uphonsa isihlalo phansi ukuze umgibelicanfinyelela phansi ngezinyawo eziphansi, lapho-ke sebethole i-hang ofUkulinganisela ongakubekaiamaphedaliemuva futhi kudewenahamba.8. 2020.
Ingabe abantu abadala bangakwazi ukugibela amabhayisikili amaxoxo?
I-hybrid yabagibeli abadala, abanolwazi oluningi, i-Ixoxo73 IHybridIbhayisikiliilungele abaneminyaka eyishumi nambili kuya kweziyishumi nane ukulinganisa okungaphakathi komlenze okungu-73cm.3. 2014.
Kungani amabhayisikili amaxoxo elunge kangaka?
Amabhayisikili Eseleyizingane ezingasindi ngokwedluleleamabhayisikiliokusho ukuthi zilula ezinganeni ezincane ukuzihambisa. Ikonangakho-kekubalulekile kubo lapho befunda ukuzizwa sengathi banokulawula. Kuzosiza ukwakha ukuzethemba kwabo ngokushesha okukhulu.
Ngabe amabhayisikili abhalansile amosha imali?
Ngenkathi abaningi bethola ukuthi kungabhekwa njenge-ukuchitha imalingenxa yokusetshenziswa kwayo okwesikhashana, lokho kungaba ukucabanga okuncane. Iqiniso ukuthi, i-ibhalansi ibhalansikuyaphumelela kakhulu ekufundiseni izingane ukuthi ungazigibela kanjani ngendlela eyiyo iibhayisikiliukuthi zikhula masishane kuyo.
Ngabe u-4 mdala kakhulu kubhayisikili elilinganiselwe?
TOibhalansi ibhalansikuyindlela enhle yokufundisa izingane ukuthi ngubanibangu-4kuya eminyakeni engu-6okudalaukufunda ukugibela aibhayisikili. Ukuthi ingane yakho isazofunda kanjani ukugibela iibhayisikilinoma ulwa nokuzethemba ukususa amasondo okuqeqesha,ibhalansi emabhayisikilikungasiza. Khumbula, isihlalo kufanele sibekwe 1? -1.5? ngaphansi kwe-inseam yengane.
Ngabe amabhayisikili wokuqeqesha angcono kunamasondo ebhalansi?
Ibhalansiamabhayisikili alula kakhulu kunamabhayisikili aneamasondo okuqeqeshazivamise ukuthi zibe HALF isisindo sephedaliibhayisikili! Ukuba nesisindo esilula kakhulu nokusebenza kahle kunamabhayisikili ngeamasondo okuqeqesha, izingane nazo zingagibela iibhalansi ibhalansikude kakhulu kune- aibhayisikilingeamasondo okuqeqesha.17 2021.
Ungakwazi ukwengeza amasondo okuqeqesha ukulinganisela ibhayisikili?
Thatha ifayela le-amasondo okuqeqeshaoff (noma okungenani, bakhulise).Umaabanakho okukhuluibhalansiokwamanje,bekakubo kuibhalansi ibhalansinoma wenze okwakho ngokususa izinyawo zabo.7. 2017.
Akulu kangakanani amasondo ebhayisikili lamaxoxo?
IFrog Tadpole ithandwa kakhulu emabhayisikili ebhalansi exoxo. Inamasondo angu-12 inch futhi ilungele iningi labaneminyaka emibili kuya kwemi-4 ubudala. Ku-4kg ilula kakhulu futhi ububanzi bemibala engu-7 kusho ukuthi kukhona okuthile kwawo wonke umuntu. Unyaka noma emibili kwiFrog Tadpole kusho ukuthi izingane eziningi zizothatha ibhayisikili lokuqala lokuqala ngokushesha futhi kalula.
Likhulu kangakanani ixoxo nonwabu kanye nebhayisikili?
IFrog Tadpole Plus ingu-14 ”isondo lebhayisikili elifanela izingane ezinkudlwana noma ezindala. Ezinye izingane zingagibela ibhayisikili ngemuva kwesikhashana kunezinye ngakho-ke ibhayisikili elinamasondo eli-12 ”lingahle lingalingani ngosayizi wamanje noma linganikeli impilo ende eyanele.
Uneminyaka engakanani ubudala angaba sebhayisikili lamaxoxo?
“Sekuphele unyaka sineFrog Tadpole kanti nendodakazi yami iyayithanda. Uthole ngo-3 kanti usasebenzisa nje u-4. Uneminyaka emi-4 ubude ku-110cm. ” - URachel “Indodana yami ine-tadpole plus ne-fab yayo, izinyanga ezimbalwa kuyo futhi ngehora lesithathu ikwazi ukugibela ibhayisikili elijwayelekile ngaphandle kokuqiniswa.